Fahasamihafana eo amin'ny Matlab sy ny C fiteny | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Matlab sy ny C fiteny | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Teknolojia / IT / Fandaharana / Fahasamihafana eo amin'ny Matlab sy C C
Fahasamihafana eo amin'ny fiteny Matlab sy C
2 Jona 2018 Narotsak'i Lithmee
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fiteny Matlab sy C dia ny Matlab dia tontolon'ny informatika mifanerasera raha toa kosa ny fiteny C dia fiteny fandaharam -pianarana ankapobeny avo lenta . Ankoatr'izay, Matlab dia ampiasaina amin'ny lahasa siansa sy injeniera ary rindrambaiko be karama raha ny fiteny C kosa tanjona ankapobeny ary loharano misokatra.
Matlab dia tontolo iray manampy amin'ny fanaovana kajy matematika toy ny famahana ny fampitoviana samihafa, ny fanaovana kajy ny fampidirana, ny famahana ny polynomial sns. Etsy ankilany, C dia fiteny fandefasana fandaharana ankapobeny avo lenta. Izy io dia ampiasaina amin'ny fampiroboroboana rafitra voarakitra, tahiry, rafitra miasa, mpanangona ary mpamily tambajotra.
2. Inona ilay Matlab
3. Inona no atao hoe C Language
4. Fampitahana mifanila - Matlab vs C fiteny miendrika tabular
Inona ny Matlab?
Matlab dia tontolon'ny fifandraisana amin'ny fanisana isa, fandaharana ary sary an-tsary. Kitapo rindrambaiko lafo vidy io. Mathworks no mpamorona ny Matlab. Manaraka ny syntax mitovy amin'ny fiteny C izy ary voasoratra mampiasa ny fiteny fandaharana C, C ++ , ary Java .
Matlab dia manampy amin'ny fanatanterahana asa matematika isan-karazany. Ireo mpampiasa dia afaka manatanteraka kajy amin'ny matrix sy vector, mamaha ny fampitoviana algebraic, ny fampitoviana eo amin'ny samy hafa, ary ny olana eo amin'ny fampidirana. Azo atao ihany koa ny manatanteraka fanadihadiana sy antontan'isa momba ny angona. Ankoatr'izay, ny mpampiasa dia afaka manao fanovana isan-karazany toy ny Fourier, Laplace, ary Inverse Laplace. Ankoatr'izay, Matlab dia manampy amin'ny famoronana teti-dratsy ho an'ny sary an-tsary. Ho fanampin'izay, Matlab dia manome fitaovana hananganana sehatr'asa mpampiasa sary manaitra. Azo atao koa ny mampiditra algorithman Matlab amin'ireo rindranasa ivelany toa ny C, Java, .NET. Seho iray hafa manampy i Simulink. Izy io dia mamela ny maodely, mamolavola ary manahaka ny rafitra.
Ity rindrambaiko ity dia malaza indrindra eo amin'ny vondron'orinasa injeniera sy siansa. Manome boaty fitaovana marobe ho an'ny statistika sy ny fianarana ny milina, ny fanodinana signal, ny rafitra fanaraha-maso, ny tambajotra neural, ny fikirakirana sary ary ny fanadihadiana an-tsoratra. Malaza eo amin'ny sehatry ny fikarohana koa izy io satria mamela ny fivoaran'ny algorithman mora foana nefa tsy misy kaody firy. Amin'ny ankapobeny, dia manampy fampiharana marobe mifandraika amin'ny fanodinana mari-pamantarana, fifandraisana, fahitana amin'ny solosaina ary fanodinana sary, rafitra fanaraha-maso, fianarana milina ary maro hafa.
Inona no atao hoe C Language?
C dia fiteny fandaharana avo lenta. Io no fiteny fandefasana programa amin'ny fiteny maro hafa toa ny Java, Python sns. Noho izany, mampiasa ny fifehezana, ny famerimberenana, ny fampiasa sns ny fiteny.
C dia fiteny miorina amin'ny mpamorona. Noho izany, ny mpamorona dia mamaky ny kaody loharano iray manontolo alohan'ny hamadihana azy io amin'ny fiteny milina. Izy io dia fiteny haingana raha oharina amin'ny fiteny voadika toa ny Python sy PHP. Tsy manome fitantanana fitadidiana mandeha ho azy toa an'i Java. Noho izany, ny programmer dia tokony hanao fitantanana fitadidiana irery. Matetika, ny fiteny C dia ampiasaina amin'ny rafitra tafiditra, programa socket, système d'exploitation sns.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiteny Matlab sy C?
Matlab dia tontolon'ny informatika mifandraika amin'ny fifandraisana raha toa kosa ny C dia fiteny fandefasana ambaratonga avo lenta. Ny fikambanana Mathworks dia namolavola an'i Matlab. Dennis Ritchie dia namolavola C ary Bell Labs no nanatsara izany. Matlab dia rindrambaiko ara-barotra. Noho izany, ny mpampiasa dia tokony handoa vola hahazoana ny rindrambaiko. Etsy ankilany, C dia loharano misokatra. Matlab dia miorina amin'ny mpandika teny. Mamaky ny kaody isaky ny tsipika. Noho izany, miadana izy io. Mifanohitra amin'izany no izy, C dia miorina amin'ny mpanangona. Mandika ny kaody loharano iray manontolo amin'ny kaody milina indray mandeha izy io. Haingana, haingana.
Tsy ilaina amin'ny Matlab ny fanambaràna karazana miovaova. Raha te-hitahiry ny sanda 2 amin'ny miovaova antsoina hoe x ny mpampiasa dia afaka manoratra mivantana x = 2 izy. Saingy, tsy mitovy amin'ny fiteny C izany. Ilaina ny manambara ny karazana miovaova. Raha te hitahiry ny soatoavina 2 ka miova x, ny programmer dia tokony manoratra int x = 2; Ankoatr'izay, ny script Matlab dia mifarana amin'ny extension .m fa ny programa C kosa mifarana amin'ny .c extension.
Famintinana - Fiteny Matlab vs C
Ity lahatsoratra ity dia niresaka ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiteny Matlab sy C. Ny mahasamihafa ny fiteny Matlab sy C dia ny Matlab dia tontolon'ny informatika mifanerasera raha toa kosa ny fiteny C dia fiteny fandaharam-pianarana ankapobeny avo lenta.
1.Tutorials Point. "C Tutorial." , Tutorials Point , 23 Mar 2018. Azo zahana eto
2. “Documentation.” MATLAB & Simulink. Hita eto
1.'Matlab Logo'By Jarekt - Asa manokana, (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2.'C.sh-600 × 600'By J.sa13d034 - Asa manokana, (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Python 2 sy 3 Fahasamihafana eo amin'ny fiantsoana amin'ny sandany sy ny antso amin'ny fanovozan-kevitra Fahasamihafana eo amin'ny Wix sy Shopify Fahasamihafana eo amin'ny famoahana be loatra sy ny fanonganana be loatra any Java Fahasamihafana eo amin'ny fanangonana sy ny fitambarana
Filed Under: Fandaharana
Momba ny mpanoratra: Lithmee
Lithmee Mandula dia nahazo diplaoma BEng (Hons) tamin'ny Computer Engineering Engineering. Manohy ny mari-pahaizana Master in Science Computer izy izao. Ny faritra mahaliana azy amin'ny fanoratana sy ny fikarohana dia misy fandaharana, siansa angona ary rafitry ny solosaina.
Fahasamihafana eo amin'ny Oxygenation sy ny oksidia
Fahasamihafana eo amin'ny Phenylalanine sy Tyrosine
Fahasamihafana eo amin'ny JDO sy ny tanjona sanda
Fahasamihafana eo amin'ny Sodium Silicate sy Sodium Metasilicate
Fahasamihafana eo amin'ny saosy Spaghetti sy saosy Pizza